Ampianaro ny Zanakao hoe Nahoana no Ratsy ny Mandainga
Nahoana no Ratsy ny Mandainga?
ERITRERETO hoe izao no lazain’ny ankizivavy iray: “Tonga dia hody aho ry Neny raha vao mirava.” Mbola nilalao niaraka tamin’ny namany izy, nefa hoy izy avy eo amin’ny reniny: “Nasain’ny mpampianatra nijanona aho rehefa nirava.” Tsara ve ny milaza zavatra tahaka izany?...
Inona no zavatra tsy nety nataon’ity ankizilahy ity?
Izao koa, ohatra, no lazain’ny ankizilahy iray: “Tsy nilalao baolina tato an-trano aho, ry Dada!” Ahoana raha tena nanao izany izy, nefa lazainy fa tsy nanao?...
Nasehon’ilay Mpampianatra Lehibe izay tokony hataontsika. Hoy izy: ‘Aoka ny teninareo hoe Eny, hidika hoe Eny, ary ny Tsia, hidika hoe Tsia; fa ny ankoatra izany dia avy amin’ilay ratsy.’ (Matio 5:37) Inona no tian’i Jesosy holazaina?... Te hilaza izy fa tokony hanatanteraka izay lazaintsika isika.
Misy tantara ao amin’ny Baiboly mampiseho fa tena ilaina ny milaza ny marina. Tantaran’ olona roa nilaza ho mpianatr’i Jesosy ilay izy. Andeha hojerentsika izay nitranga.
Tsy ampy roa volana taorian’ny nahafatesan’i Jesosy, dia maro ny olona avy lavitra tonga tany Jerosalema mba hankalaza ny Pentekosta, izay fety nalaza teo amin’ny Jiosy. Nanao lahateny momba an’i Jesosy natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty ny apostoly Petera. Tamin’io fotoana io vao nandre momba an’i Jesosy ny ankamaroan’ireo olona tonga tany Jerosalema. Nahaliana azy ireo izany, ka inona no nataony?
Nijanona elaela tany Jerosalema izy. Tsy nanam-bola intsony anefa ny sasany rehefa afaka kelikely, ka nila fanampiana mba hahitana vola hividianana sakafo. Te hanampy an’ireo mpitsidika ireo ny mpianatra nonina tany Jerosalema. Nivarotra ny fananany ny sasany ary nitondra ny vola teo amin’ny apostolin’i Jesosy. Nozaraina tamin’izay nila izany ilay vola.
Nivarotra ny taniny i Ananiasy sy Safira vadiny, anisan’ny fiangonana tany Jerosalema. Tsy nisy nanery azy ireo hanao izany. Fanapahan-kevitr’ izy mivady manokana ilay izy. Tsy tia an’ireo mpianatr’i Jesosy vaovao anefa izy, fa te hiseho ho tsara teo imason’ny olona fotsiny. Tapa-kevitra àry i Ananiasy sy Safira hilaza fa hoe ny vola rehetra vidin’ilay tany no homeny hanampiana ny hafa. Ny sasany tamin’io vola io ihany anefa no homeny, raha ny marina. Ahoana ny hevitrao momba izany?...
Tonga teo amin’ny apostoly tokoa i Ananiasy, ary nanome vola. Mazava ho azy fa fantatr’Andriamanitra hoe tsy ny vola rehetra io nomeny io. Nampahafantarin’Andriamanitra an’i Petera fa tsy nilaza ny marina i Ananiasy.
Inona no lainga lazain’i Ananiasy amin’i Petera?
Hoy i Petera: ‘Nahoana ianao, ry Ananiasy, no nanaiky hampanaovin’i Satana izao zavatra izao? Taninao ilay izy. Tsy voatery nivarotra azy ianao. Ary mbola ianao koa no nanapa-kevitra ny amin’izay hanaovanao ny vola, rehefa lafo ilay izy. Koa nahoana ianao no mody nilaza fa ny vola rehetra no omenao nefa ny vola sasany ihany no omenao? Mandainga ianao, ary tsy mandainga aminay ihany fa amin’Andriamanitra koa.’
Tena ratsy ilay izy. Nandainga i Ananiasy! Tsy nanatanteraka izay nolazainy fa hotanterahiny izy, fa mody nanao an’izany fotsiny. Lazain’ny Baiboly amintsika izay nitranga avy eo: ‘Nianjera mafy i Ananiasy ka maty, rehefa nandre ny tenin’i Petera.’ Nasian’ Andriamanitra izy ka maty! Nentina nivoaka ny fatiny, ary nalevina.
Naninona i Ananiasy noho izy nandainga?
Tonga koa i Safira, adiny telo taorian’izay. Tsy fantany izay nanjo ny vadiny. Hoy i Petera taminy: ‘Iny vola nomenareo anay iny ve no vidin’ny taninareo mivady?’
Hoy i Safira: ‘Ie, iny ihany ny vola vidin’ilay tany.’ Lainga anefa izany! Notazonin’izy ireo ny sasany tamin’ilay vola vidin-tany. Nasian’Andriamanitra koa i Safira ka maty.—Asan’ny Apostoly 5:1-11.
Inona no anatra tokony horaisintsika avy amin’izay nanjo an’i Ananiasy sy Safira?... Tsy tian’Andriamanitra ny mpandainga. Tiany hilaza ny marina foana isika. Maro anefa ny milaza fa tsy mampaninona ny mandainga. Marina ve izany, araka ny hevitrao?... Fantatrao ve fa ny lainga no nahatonga ny olona harary sy hijaly ary ho faty?...
Iza, hoy i Jesosy, no nandainga voalohany, ary inona no vokany?
Tadidio fa nandainga tamin’i Eva, vehivavy voalohany, ny Devoly. Nolazainy fa tsy ho faty i Eva raha tsy nankatò an’Andriamanitra, ary nihinana tamin’ilay voankazo tsy navela hihinanany. Nino ny Devoly i Eva ka nihinana tamin’ilay voankazo. Nampirisihiny koa i Adama ka nihinana. Lasa mpanota izy mivady, ary mpanota koa ny zanany rehetra. Nijaly sy maty ny taranak’i Adama satria mpanota. Inona no nahatonga izany rehetra izany?... Ny lainga.
Tsy mahagaga raha nolazain’i Jesosy hoe ‘mpandainga sady rain’ny lainga’ ny Devoly! Izy no nandainga voalohany. Manahaka ny Devoly izay rehetra mandainga. Tokony hotadidintsika foana izany, rehefa alaim-panahy handainga isika.—Jaona 8:44.
Rehefa maninona moa ianao no alaim-panahy handainga?... Rehefa nanao zavatra tsy nety, sa tsy izany?... Mety hanimba zavatra ianao, na dia tsy manao fanahy iniana aza. Tokony holazainao ve fa ny zandrinao na ny zokinao no nanao ilay izy, raha anontaniana ianao? Sa mody tsy mahafantatra ilay izy ianao?...
Rehefa maninona ianao no mety halaim-panahy handainga?
Ahoana raha asaina manao devoara ianao, nefa ny sasany ihany no ataonao fa tsy izy rehetra? Tokony hilaza ve ianao hoe vitanao daholo ilay izy, nefa tsy marina akory izany?... Tokony hotadidintsika foana i Ananiasy sy Safira. Tsy nilaza ny tena marina izy ireo. Nasehon’Andriamanitra fa tena ratsy ny nataon’izy ireo ka novonoiny ho faty izy.
Nanao zavatra tsy nety angamba isika, nefa vao mainka hiharatsy izany raha mandainga isika. Tsy tokony hanafina ny tena marina koa isika. Hoy ny Baiboly: ‘Milazà ny marina.’ Hoy koa izy: ‘Aza mifandainga ianareo.’ Milaza ny marina foana i Jehovah, ary manantena izy fa hilaza ny marina foana koa isika.—Efesianina 4:25; Kolosianina 3:9.
Tokony hilaza ny marina foana isika. Izany no hevi-dehibe ao amin’ny Eksodosy 20:16; Ohabolana 6:16-19; 12:19; 14:5; 16:6; Hebreo 4:13.
Hizara Hizara Nahoana no Ratsy ny Mandainga?
Milazà ny Marina